Iintlola zaseRussia zigxile eHawaii ukusuka kwinqanawa esemantla e-Oahu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iimfihlo zohambo » Iintlola zaseRussia zigxile eHawaii ukusuka kwinqanawa esemantla e-Oahu
ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iindwendwe zaseRussia zamkelekile eHawaii, kodwa hayi iintlola zaseRussia. I-Russian ekhwele inqanawa ye-spy esebenza i-200 yeekhilomitha kumantla e-Oahu ayizukufumana Aloha Wamkelekile ngokundwendwela amanzi aseHawaii.
Inqanawa yokujonga umkhosi wamanzi waseRussia ibonakele ihleli kunxweme olusentshona yeHawaii ngoMeyi ngokwe-USNI News
Namhlanje inqanawa yaseRussia iye yabonwa isebenza ngaphandle nje kwamanzi e-US kuMantla e-Oahu
Uvavanyo lokhuselo lwemijukujelwa yaseMelika lwalibaziseka kancinci eKauai kwinyanga ephelileyo ngenxa yobukho benqanawa yaseRussia.
Ukhenketho luyanda kwi Aloha Urhulumente. Akukho mntu ukhathazekileyo malunga nenqanawa yase-Russia ye-spy nje i-200 yeekhilomitha kumantla esiqithi sase-Oahu.
Ngokubanzi, Amanzi aphesheya aqala malunga neekhilomitha ezingama-200 ze-nautical ukusuka kunxweme lwelizwe kwaye uqhubeke ngaphandle.
Inqanawa yaseRussia ngoku isebenza kula manzi. Kwibhodi ngamagosa ezobuntlola aseRussia abaziwa njengeentlola. Umsebenzi wabo kukuqokelela ubukrelekrele kufakelo lomkhosi wase-US kwisiqithi sase-Oahu, eHawaii. Oku kwaqinisekiswa kumajelo asekuhlaleni ngamagosa oMkhosi waseMelika
Inqanawa ye-spy yafunyanwa emantla esiqithi i-Oahu.
Kwinyanga ephelileyo inqanawa yaseRussia yayihambahamba emanzini aphesheya kweKauai kangangeentsuku ezininzi. Ubukho bale nqanawa babulibazise kuvavanyo lwemijukujelwa laseMelika.
Iindaba ze-Naval Institute yase-US, eyayingowokuqala ukuxela ubukho benqanawa, yathi yayiyi-Russian Navy Vishnya- yodidi lomncedisi wenqanawa yobukrelekrele uKareliya (SSV-535).
The Iklasi yeVishnya (eyaziwa nangokuthi Meridian eklasiniLiqela le iinqanawa zokuqokelela ulwazi eyakhelwe i Umkhosi wamanzi waseSoviet kwiminyaka yoo-1980. Iinqanawa ziyaqhubeka kwinkonzo kunye Umkhosi waselwandle waseRussia. Isikhundla seSoviet Iprojekthi ye864. Umkhosi waselwandle waseRussia usebenza ezisixhenxe kwezi nqanawa.
Inqanawa esekwe eVladivostok kwimishini yaseHawaii yenye yee-AGI ezisixhenxe ezijolise kwezobuchwephesha, utshilo Iindaba zeUSNI. Akuzange kucace ngokuhlwanje ukuba inqanawa yokuqokelela yaseRussia esebenza e-Oahu iyafana naleyo yafunyanwa ngasekupheleni kuka-Meyi.
Njengoko kuchaziwe kolu papashoIinqwelomoya ezintathu ezisuka eHickam Airforce zatshona ngeCawa ukugcina umkhosi waselwandle ophantsi kolawulo uqhuba owona msebenzi mkhulu ukusukela kwimfazwe ebandayo kwiikhilomitha ezingama-300 ukusuka elunxwemeni Aloha Isizwe,
Igosa lomkhosi waselwandle waseUnited States laxelela iphephandaba laseHawaii ukuba: “Sisebenza ngokuvumelana nomthetho wamazwe ngamazwe wolwandle nowasemoyeni ukuqinisekisa ukuba zonke izizwe zinokwenza okufanayo ngaphandle koloyiko okanye ukhuphiswano kunye nokufumana i-Indo-Pacific ekhululekileyo nevulekileyo. Njengokuba iRussia isebenza kulo mmandla, kulindeleke ukuba yenze njalo ngokuhambelana nomthetho wamazwe aphesheya. ”
Umkhosi Womoya wase-US une-F-22s, abaqhubi beenqwelomoya, abagcini, kunye nabasebenzi bezixhobo ekubizeni iiyure ezingama-24 ngemini eHickam ukuphendula izoyikiso zomoya kwiziqithi zaseHawaii njengenxalenye yemishini yokulumkisa ngomoya.